28/03/2016 : Website Knowledge : Good Idea! Using " Fashion Trends" in decorate your website to get more attractive
Home > News March 2016 > 28/03/2016 : Website Knowledge : Good Idea! Using " Fashion Trends" in decorate your website to get more attractive
Tags: website knowledge
သင့် Website ကို လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရန်အတွက် Fashion Idea ကောင်းကောင်းဖြင့် အလှဆင်ရန် ယေဘုယျအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။
ယနေ့ Readyplanet မှ စတိုင်ကျပြီး လှပသည့် ဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Website ၆ ခု ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Online World မှ အချို့ လှပသေသပ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းသည့် Website များကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်သည့်အတွက် သင့် Website အတွက် အထောက်အကူ ရရှိမှာတော့အမှန်ဖြစ်ပါသည်။
၁. Go Crazy for Patterns - လှပသည့် အနုပညာ ခံစားချက်များကို ဖော်ပြခြင်း။။
Website Background ကို သင့်အနေဖြင့် Geometric patterns, stripes, flowers, seafood နှင့် သင့် အာရုံကို ဖမ်းစားထားနိုင်သည့် Features များဖြင့် ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ သင့် Product လိုက်ဖတ်သည့် Background ကို ရွေးချယ်တက်ရမည့် အချက်ကို သတိထားပေးရပါမည်။ အကယ်၍ သင့် Product သည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပုံစံ မျိုးဖြစ်ပါက သင့် အနေဖြင့် Pattern ကို ရိုးရှင်းသည့် ပုံစံ ကို အသုံးပြု သင့်ပါသည်။ အခု ဖော်ပြထားသည့် Pattern သည် website တော်တော်များနှင့် လိုက်ဖက်သည့် Pattern တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သင့် Product / Brand အတွက် လိုက်ဖက်သည့် Design ကို ရှာဖွေလိုပါက Inspire's Famous Fashion Megazine Website သို့မဟုတ် Block of Fashionalbe models များဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Source : http://www.fashionisers.com/trends/fall-winter-2015-2016-print-trends/
Design for Cards - ReadyPlanet Website Package Shop L
၂. Less is More - အနည်းငယ် ရှိးရှင်းပေမယ့် Quality အပြည့်ပါဝင်သည်ကို ဖော်ပြခြင်း။
ရိုးရှင်းသည့် Design များသည် ရိုးရှင်းပေမယ့် Fashion လောကတွင် နာမည်ကြီးပြီး ကျော်ကြား ကြပါသည်။ အဆိုပါ Design မျိုးကို Flat Degin ဟုခေါ်ဆိုပြီး အခုနောက်ပိုင်းတွင် ခေတ်စားလာပါသည်။
Flat Design ၏ ရိုးရှင်းပုံကို ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ အခုခေတ်နောက်ပိုင်း အသုံးပြုများ သည် အခြား effect များဖြင့် ရောနှော အသုံးပြုမှု မရှိတော့ပါ။ အဆိုပါ အချက်သည် အရင် ခေတ် နှင့် အခု ခေတ် ကွာခြားချက် ဖြစ်လာပါသည်။ အရင်ခေတ်က Flat Design များသည် စာအုပ်စင် ပုံစံ Design ရိုးရိုးများ ဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ ရှိပါသည်။
Source : http://www.fashiongonerogue.com/cos-2016-spring-womens-lookbook/
Eastwood Aterier - ReadyPlanet Website Package
၃. Let's Celebrate the Seasons - Website ကို Fashion ရာသီ အပြောင်းအလဲ အချိန်တွင် အမြဲ update ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။
နောက်ထပ် တစ်ရာသီ အစရောက်ပြီး ဆိုပါက Fashion Designer များသည် ရာသီ အလိုက် ရွေးချယ်ထားသည့် colors ၂ မျိုး၊ ၃မျိုး ကို ဖြန့်ချိလေ့ရှိပါသည်။ Designers အများစုသည် သူတို့ Clothing Design များအတွက် Color များကို သူတို့ စိတ်ကြိုက်အခြေခံ မှ စပြီး collection လုပ် ရွေးချယ်လေ့ ရှိပါသည်။ Fashion guru များသည် သူတို့ အဝတ်အစားများအတွက် အရောင်များ ရောနှော ခြင်း ၊ လိုက်ဖက်သည့် အရောင်များ ပြုလုပ်ခြင်းကို လွန်စွာ ပျော်ရွှင်ကြပါသည်။ Website အတွက် လည်း သူတို့ အဆိုပါ အတိုင်း ရွေးချယ် ပြုလုပ်ကြပါသည်။
Website Color ကို Chinese New Year နှင့် Valentine's Day များတွင် အနီရောင် နှင့် ပန်းရောင် ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ပထမ ဦးဆုံး အရေးကြီးသည့် နေ့ရက်များ အတွက် အရောင် ရွေးချယ် ထားရပါသည်။ ထို့နောက် သင့် Website တွင် အသုံးပြုပါ။ သင့် Product နှင့် ပွဲတော် ရက်များ အတွက် ရွေးချယ်ထားသည့် Color သည် လိုက်ဖက် ရှိအောင် ရွေးချယ်ရန် မမေ့ပါနဲ့။ သင့် website ကို စိတ်ဝင်စားအောင် အမြဲလုပ်ဆောင်မှသာ သင့်အတွက် ရောင်းအားတက်လာနိုင်ပါသည်။
Source : http://www.vogue.com/9798411/valentines-day-inspired-runway-fashion/
Balloon Art to go - ReadyPlanet Website Package
၄. Create An Attractive Logo - သင့် Brand ၏ Design ကို လူ သိများ ပြီး မှတ်မိ လွယ်အောင် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
Logo နှင့် Brand Design ကို ပြုလုပ်မယ် ဆိုရင် သင့်အနေဖြင့် သင့် Product နှင့် Service အကြောင်းကို စဉ်းစားရပါမည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နောက်ပိုင်း သင်အနေဖြင့် အဆိုပါ Logo ကို အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ သင့် Product ၏ ကိုယ်စားပြု ပုံလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေဖြင့် သုံးစွဲသူများ နှင့် ရင်းနှီးလောက်သည့် Design ကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
သင့် Logo သည့် ရှုပ်ထွေးမနေပါက သုံးစွဲသူများသည် လွယ်ကူစွာ မှတ်မိနိုင်ပြီး အခြား Brand များနှင့်လည်း ဆင်တူ မဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါမည်။ လူကြိုက်များပြီးသား logo Design ကို အသုံးမပြုရန် အကြံပြုပါသည်။ ဥပမာ အနေဖြင့် Fashion Brands များထဲတွင် နာမည် ကြီးသည့် Louis Vuitton နှင့် Chanel တို့၏ logo သည် နှစ် ၁၀၀ ထက် သက်တမ်းရှိပါသည်။ အဆိုပါ Logo ၂ ခု သည် Luxury ကို ကိုယ်စားပြုသည့် Brand များအဖြစ် လူသိများ ပါသည်။ အချို့လူများသည် အဆိုပါ Logo ကို ပြောင်းပြီး ကိုယ့် product logo အဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါသည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ Brand နာမည် ကျ ပါက သင့် brand ပါ နာမည် အလိုအလျောက်ကျ လာပါလိမ့်မည်။
Bike Monster - ReadyPlanet Website Package
၅. Oversize it - ဓာတ်ပုံကို Extend နှင့် Focus ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
အဝတ်အစား Fashion နှင့် ကျောက်မြတ်ရတနာ Fashion များ တွင် ပုံမှန် စိတ်ထက် အနည်းငယ် ပိုကြီးထားရခြင်းသည် မြင်ရသူများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ Web Designer များ အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါ Oversize ဆိုသည့် ပုံစံ ကို အတုယူသင့်ပါသည်။ သင့် Product ၏ အားသာချက်ကို ဖော်ပြသည့် ပုံကို သုံးစွဲသူများ နှင့် ရင်းနှီးအောင် ဖန်တီးပြီးပါက Website Banner နေရတွင် ပုံကြီးကြီး ဖြင့် အသုံးပြုလိုက်ပါ။ ဒါမှ သုံးစွဲသူများ က သင့် Product ကို မှတ်မိလွယ်ကူပြီး သင့်ထံ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်လာနိုင်ပါသည်။
Source : http://cinefog.com/fall-winter-2015-2016-fashion-trends/
Fonig Lab Cosmetic - ReadyPlanet Website Package
၆. Showcase Real People - Stock image ထက် Visuals photo ကို အသုံးပြုပါ။
သင့် Fashion Brand ကို သုံးစွဲသူများ နှင့် နီးကပ် စေရန် ရှင်းလင်း သိရှိနိုင်ပြီး တကယ်တမ်း ဝတ်ဆင်ထားသည့် Photo ကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။ ဒါမှ သင့် ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် မော်ဒယ် ပုံကို အသက်ဝင်သည့် ပုံစံ ဖြင့် မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်၏ ဝန်ထမ်းများမှ သင့် Product ဖြင့် သုံးစွဲသူ ကို Service ပေးနေသည့် ပုံ သို့မဟုတ် သင့် Product ကို သုံးစွဲသူမှ ဝယ်ယူနေသည့် ပုံ ကို ဖန်တီးထားပါက သင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအပေါ် ပိုမို ယုံကြည်မှု ရလာနိုင်ပါသည်။ အသင့်ဝယ်ယူထားသည့် ပုံများ ထက် ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထား သည့် ပုံများ ကို အသုံးပြု ရခြင်း ၏ ကွာခြားချက်မှာ အပေါ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ယုံကြည်မှု ကို ရယူသည့် နေရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ထိုအချက်သည သင့်အတွက် အရေးကြိးသည့် အချက် ပင်ဖြစ်ပါသည်။
Source : http://fashionista.com/2015/06/dolce-gabbana-fall-2015-campaign
Bua Sabai - ReadyPlanet Website Package
အခု ရှင်းပြခဲ့သည့် နည်းလမ်း ၆ ခုသည် သင့် website ကို decorate ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်ပါနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါ နည်းလမ်းများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုပါက သင့်အတွက် အကျိုးရှိနိုင်မှာ ပါ။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါနည်းလမ်းများ ကို သင့် website အတွက် အသုံးပြုမှ သင့်တော်မည်ဟု ဆိုလို ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Website မရှိလို့ ပြုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်တော် တို့ ReadyPlanet မှ Website service များ ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။